Antandrevaka nataon’olona iray no namoizana fananan’olona maro
Tokatrano miisa 10 eohoeo no kilaforehitra tetsy Tanambao II
Tamin′ny 11ora atoandro teoo no nisehoana haitrano tetsy Tanambao II akaikin′ny UPRIM bazar kely, ny zoma 17 oktobra lasa. Saika mpivarotra hanimasaka avokoa ireto may trano ireto (mpivarotra la soupe), vinavinaina eo amin′ny trano folo eo ho eo no may kil′aforehitra, fantatra nandritra ny fanadihadina izay nataonay teny antoerana fa afon-tsaribo no nahatonga ny firehetana, araka ny nambaran′ny olona iray izay isan′ireo niaran-doza, dia niainga avy tamina efitrano iray ao ambadiky ry zareo ny afo, voalaza fa nandrehatra afon-tsaribo ity olona ity ary dia natokony ny nahandro, navelany tao an-trano ny tokoana ary nohidiny ny trano. Taitra mafy ny manodidina raha nahita ny setroka mainty be nivoaka avy tao an-trano ka voatery nanapitsoka ny trano izay nihidy. Nandrivotra sady maina be koa moa ny andro tamin′ny nisehoan′ity loza ity ka nahafaingana ny fiparitahan′ny afo tamin′ny toerana manodidina teo. Mandraham-pahatongan′ny mpamonjy voaina anefa dia niezaka nanao vonjy rano vaky ihany ny manodidina, 15 minitra nitrangan′ity haitrano ity dia tonga ny mpamonjy voina avy amin′ny Commune Urbaine de Toamasina, tsy ampy namonoana ny afo ny rano noentina tamin′izany, ka nanao fiverenana indray amin′ny famatsiana ny rano. Tonga ihany koa ny mpamonjy voina avy amin′ny Port, nanampy amin′ny famonoana afo, saingy nisy ny olana teo amin′ny fitehirizana rano ambony fiara ka very sasaka ny rano izay noentin′izy ireo. Na izany aza anefa dia voafehy ihany ny afo, tao anaty ora vitsy.
Nandritra ny foatoana nandalovanay teny antoerana, tsy nahitana ny olona naratra ary tsy nisy araka izany ihany koa ny aina nafoy nateraka ity loza ity.
Tsara ihany ny mitandrina amin′ny toe-javatra tahaka itony, marina fa ny tampoka hono tsy maha lehilahy nefa tsy misy afa tsy ny fitandremana ihany no tena zava-dehibe. Hatreto ihany koa mbola azo lazaina ho marefo ihany ny sehatry ny famonjena voina tahaka an′itony eto amitsika, mihevitra hoe afo inona no tsy ho faty rehefa tratry ny rano, nefa ny rano indraindray tsy mahafaty afo eoeo indrindra fa raha hotely toy itony, menaka no saika mameno ny trano.
(84) Lantomalala SAHONDRANIRINA : 20-10-2014 - 08:10